कोरोनाको बिमा गर्ने - पैसा चाहिं नदिने ? - Yugantar Khabar | News Portal
Posted on October 3, 2021 October 3, 2021 by Basanta Pariyar
काठमाडौं : बिमा समितिले सुरुमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बिमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई भन्यो। कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बिमा गर्न थाले। कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि भने जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो। तर, बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बिमासम्बन्धी व्यवस्था ग¥यो। सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए। अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न भन्यो।
त्यसपछि थालेको बिमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके। भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा छन्। बिमितले रकम भने अझै पाउन सकेका छैनन्। हरेकको प्रश्न छ– ‘बिमा कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ?’
– चिरञ्जीवी चापागाईं, निवर्तमान अध्यक्ष, बिमा समिति
मापदण्डमा भएको सम्झौताअनुसार नियामक निकायले दायित्व पूरा गरेको छ। बाँकी भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने हो। हामीले अनुरोध गरिरहेका छौं। अर्थमन्त्रीसँग यसबारे छलफल भएको छ। समाधानका विकल्प माग्नुभएको छ। यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि नै सरकार यसमा जानकार भए पनि दाबी भुक्तानीका लागि निकासा भने भएन।
– सूर्य सिलवाल, अध्यक्ष, बिमा समिति
विश्वमा कहीँ पनि महामारीको बिमा हुँदैन। तर, तत्कालीन सरकार लोकप्रिय हुन कोरोना बिमा कार्यक्रम ल्याए। अहिले सरकारको दायित्वमा परेको रकम निकासीको उपाय डोनर खोज्ने कि भन्ने सोच अर्थमन्त्रीको छ।
– गोविन्द रोक्का (सचिन), अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार
कोरोना बिमाको भुक्तानी चालू खर्चअन्तर्गत पर्छ। डोनरसँग ऋण लिएर दिन सम्भव छैन। यो बिमा ल्याउने नेतृत्व नै अहिले मन्त्रालयमा छैनन्। यसको जिम्मेवार उहाँहरू नै हुनुहुन्छ।
– महेश आचार्य, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
सिद्धान्त मिचेर कोरोना बिमा ल्याउनु हुँदैनथ्यो। तर, ल्याए। यो प्रडक्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छैन। यसप्रकार कोरोना बिमा गैरकानुनी मानिन्छ। तर, यहाँ एउटाले गरेको बदमासीलाई सरकारले रोक्नुभन्दा प्रवद्र्धन ग¥यो। यसमा सबै पक्षको गल्ती छ। कोरोना बिमा रद्द गर्ने हो भने पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो। दाबी पर्न थालेपछि रद्द गर्नु फट्याइँ हो।
– डा. रवीन्द्र घिमिरे, बिमा विज्ञ
बिमा समितिको अनुरोधमा हामीले यो प्रडक्ट सुरु गरे पनि स्थगन गरिसकेका थियौं। तर, सरकारले निरन्तर गर्न भन्यो। मापदण्डको आधारअनुसार सरकारले निकासा गर्नुपर्ने हो। विमितबाट दाबी माग र सोधपुछ आइरहन्छ। सरकारले भुक्तानी गर्ने पर्खेका छौं।
– चंकी क्षेत्री, महासचिव, नेपाल बिमक संघ
‘प्रक्रिया सबै पुगेको छ भनियो। तर, भुक्तानीमा विभेद गरे। कम्पनीले बिमालेख सम्झौता गर्दा सरकारले दिन्छ भनेर गरेका त होइनन् नि !’, उनी भन्छन्, ‘यो सरासर गैरजिम्मेवारी हो।’
विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे योजनाबिनै महामारीको बिमा थालेकाले यस्तो स्थिति आएको बताउँछन्। ‘जबकि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यसको अभ्यास देखिँदैन। बिमा शुल्क धेरै उठ्ला र नाफा कमाउला भन्ने कम्पनीको सोच कोरोना बिमाले भने सम्भव भएन’, डा. घिमिरे भन्छन्।
पोलिसी जारी गरेपछि भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर बोल्दा–बोल्दा थाकेको डा. घिमिरे बताउँछन्। उनी कोरोना बिमालाई गैरकानुनी ठान्छन्। यस्तो बिमा गर्ने चलन कहीँ नभएको र सम्भव पनि नभएकाले नेपालले यसलाई हावाको भरमा ल्याएको उनको ठहर छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बिमा हुँदैन। त्यो हिसाबले नेपालमा कोरोना बिमा गैरकानुनी मानिन्छ।
समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इं सरकारले बजेटमा समेटेकाले कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। ‘बिमा समितिले सुरुमा कोरोना बिमा जारी गरे पनि बन्द गरेको थियो। तर, पछि सरकारले आव २०७७/७८ को बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो’, चापागाईं भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएर यसलाई नियमित गर्न भनेको थियो। यसैले मापदण्ड बनाएर दाबी भुक्तानीको बाँडफाँड गर्ने काम गरेका थियौं।’
यो विषयलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा समेटेनन्। पछि अर्थमन्त्री शर्माले संशोधित बजेटमा पनि सम्बोधन गरेनन्। अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द रोक्का (सचिन) तत्कालीन सरकारले लोकप्रिय हुन यो कार्यक्रम ल्याएको तर्क गर्छन्। महामारीको बिमा कुनै पनि मुलुकले नगरेका कारण नेपालमा यस्ता प्रोडक्ट ल्याउनु गल्ती भएको रोक्का बताउँछन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भने कोरोना बिमाको भुक्तानी चालू खर्चअन्तर्गत पर्ने भएकाले दातृ निकायसँग ऋण लिएर दिन सम्भव नहुने तर्क गर्छन्। ‘जसले यो बिमा जारी गर्न निर्णय गरेको थियो सो नेतृत्व नै अहिले मन्त्रालयमा छैनन्। यसको जिम्मेवार उहाँहरू नै हुनुहुन्छ’, प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि निकासा गर्नेमा कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनौं। बिमा समितिले पनि यसबारे पत्र पठाएकै हो। काम भने अगाडि भएको छैन।’ खोप जुटाउन गाह«ो परिरहेकाले बिमा भुक्तानीको निकासीबारे कुनै निर्णय गर्नै नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए। दाबी भुक्तानी बाँडफाँड गरियो। सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो।
मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बिमा कम्पनी (बिमक)ले जतिसुकै बिमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले दिनुपर्छ। साढे २ अर्बसम्म बिमकको महाविपत्ति पुल (बिमा कम्पनीहरूको कोष), त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बिमा समितिले र साढे ३ अर्ब माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो।